Imisa Ayuu Qiimo Ahaan Ku Fadhiyaa Labiskii Kareena Kapoor Khan Dhawaan Lagu Arkay (+Sawiro) - Hablaha Media Network
Imisa Ayuu Qiimo Ahaan Ku Fadhiyaa Labiskii Kareena Kapoor Khan Dhawaan Lagu Arkay (+Sawiro)
HMN:- Atirishada caanka ah Kareena Kapoor Khan waxay jeceshahay inay xarakooto xaalad walbo oo ay ku jirto marka ay filim duubeyso, bandhig Fashion qabaneyso, xaflada ka qayb galeyso ama xitaa socdaal caadi ah marka ay ku jirto.
Hadaba dhawaan waxaan idinla wadaagnay sawiro muujinaayo Kareena Kapoor oo kusii jeedo magaalada London si ay seygeeda Saif Ali Khan halkaas ugu tagto.
Waxaa lasoo bandhigay Bebo labiska ay wadatay qiimo ahaan inta uu ku fadhiyo madaama xidigaan jeceshahay inay marwalvo labis cusub ku xarakooto.
Labiska guud oo ay Kareena wadatay waxaa lagu xaqiijiyay qiimo ahaan inuu ku fadhiyay 1.40 Lakh ($2,121) waana qiimo aad u sareeyo in lagu labisto.
Waxaa si gaar ah loo xusay jaakada soo jiidashada badan ee Kareena wadatay inay kaligeed qiimo ahaan ku fadhiso 46,960 Rupees ($712).
Sidoo kale boorsada gacanta nooca Gucci ay wadatay Bebo waxaa lagu qiimeeyay kaligeed 81,815 Rupees ($1,239) waxaa kasii daran kabaheeda lagu magacaabo Golden Goose Deluxe waxay qiimo ahaan suuqa ka joogaan 11,481 Rupees ($174).
Dabcan Kareena Kapoor Khan hadal heyn xoogan ayay abuurtay madaama xidigtaan labis qaali ah ay soo qaadatay xili ay magaalada London maalmo ka hor kusii jeeday.